333 444 10:10 11:11 Yiyiphi Inqaku elithethayo
Iintsingiselo zeNombolo zeNombolo 11:11 222 333 444
Ngaba uye wakha wazibuza ukuba kutheni ukulandelwa kwenani elithile libonisa xa uphuma ngosuku lwakho? Kwakhona ebusuku! Umzekelo, mhlawumbi unomkhuba wokuvusa ngokukhawuleza ngo-3: 33 ekuseni okanye ngo-4:44. Kubonakala ngathi ufuna ukwazi, akunjalo?
Ukuba ufumana le ngxaki yokulandelana kwenani ephuma kuyo yonke indawo oya kuyo, yazi nje ukuba awodwa. Kwakhona, ukubona amanani aphindaphindiweyo ayengasecaleni nje kwiiyure zakho kunye namawashi.
Amanani aya kubamba ingqalelo kwiimathegi zamanani, iirisithi zokufumana iirekhodi, i- invoyisi , i-ID yeefowuni, iipleyiti zeelayisiti, amabhodi amabhodi, yonke indawo! Abaninzi bethu bafumana oku kwaye akukho nto yokwesaba. Enyanisweni, ukubeka nje, ikhadi lokubiza leZiko eziPhakamileyo. Xa ndiqala kuqala ukubhala eli nqaku ndijonga ngehora. Yafunda ngo-11: 11 ekuseni kwaye xa iphelile iwashi yayingu-3: 33 ebusuku.
Oko Iingelosi Zikusho Ngayo Imilinganiselo Yayo
Nantsi iingelosi kunye nezibane zokuKhanya ezivela kwiiNdawo eziPhakamileyo zixelele oku oku. Ndiza kufuneka ndiphule kwaye ndenze lula inkcazo yabo ngendlela engqondweni yethu engqondweni. Enyanisweni, yonke inkcazo ingaphezu kwamandla ethu okomntu okwangoku ukuba aqonde ngokupheleleyo ngeli xesha ekuqhubeni kwethu. Kodwa iindaba ezilungileyo kukuba oku kuya kusitshintsha kuthi, kwaye enye yenkcazo yamanani.
Iingelosi zitsho ukuba indalo yethu idlulela kwizinto ezilula kakhulu apha eMhlabeni izibalo kunye nejometri . Oku kuninzi kunene koko kodwa oko iinjongo zethu zomntu zikubona. Le yile mculo, ukufundwa kweenkwenkwezi, ukubhaliswa kweembalo , kunye ne- geometry engcwele . Amanani oqhubeka uwabonayo yikhowudi ebonisa iDNA yakho yamandulo, imemori yakho yeselula kunye nokuqonda kwakho okuphezulu ukuvusa.
Ukuvusa kwisigaba, isikhala somoya ngakumbi entliziyweni yakho nangengqondo kunye nobomi bakho.
Kukho iingcamango ezininzi, iincwadi kunye namanqaku malunga nokutshintshwa kwala manani . Iingcaciso zam zingahluka kwizinto ozifundileyo. Xa ndixubusha ukulandelelaniswa kwamanani ndibhekisela kwikhowudi okanye amandla amanani avela kwiindawo eziphezulu ezifuna ukuvusa.
Xa ubona ukulandelelana kwenombolo kungachazwe apha, kodwa oku kufana nokuphindaphindiweyo, into ebalulekileyo ukuyenza kukuxhuma kwi-yakho ephakamileyo kwaye ubuze oko kuthetha ntoni kuwe. Ukuba akukho nto ithatha nje umzuzwana, phefumula ngokuzeleyo uze uthi "Ndikulungele ukufumana" okanye "Ndikulungele ukukhuphela.
Nazi ezinye zeenombolo eziqhelekileyo ezibonwa ngabantu abavusayo kulwimi olutsha lwamanani kwaye zeziphi iindidi ezininzi kunye nabaphilisi abaye batyhila intsingiselo yabo:
111 - Ukubonakaliswa
Ukubona 111 kuthetha ukuba ungomzuzwana apho ungadala ubomi bakho. Qinisekisa ukuba iingcamango zakho zintle kakhulu.
222 - Khanyisa ukuKhanya kwakho
Ukubona i-222 yinani lokuma ngaphandle, ukuqhubela phambili, inhlanhla, ukuxhotyiswa kunye nokuxhamla. Xa ubona le nombolo i-Universe ithi "Ungakhanyisa ukukhanya kwakho ngendlela yakho ekhethekileyo." Kwakhona kuyisikhumbuzo sokugcina amandla akho emandleni nangona abanye bengenakukhathazeka okanye banqwenela ukuba ukhanya kangakanani okanye ukwazi ukukhanya.
Le nani inokuxelela ukuba wenze uphawu lwakho kwilizwe lakho kumsebenzi wakho okanye ubomi bakho. "Yiba nokholo, yonke into iya kuba yinto efanelekileyo. Musa ukukhathazeka malunga nantoni na, njengoko le meko isombulula ngokuhle kubo bonke abandakanyekayo." Le ngqungquthela evela kwi- Doreen Virtue . Ingcaciso yeengelosi ngenombolo 222.
333 - Iintsikelelo
Inombolo kaKrestu yokuChengisisa i-333. Akukho nto yokwesaba. Oku kuyimpawu yokuba uyasikelela kwaye izidalwa ezingcwele zihlala zijongene ngqo nomphefumlo wakho okanye into ebomini bakho ngeli xesha.
444 - Iingelosi zikunye
Le nombolo iyintandokazi yeengelosi. Kwaye ukuba uyibona, yazi ukuba ukhona kwiingelosi ezikummandla weengelosi inombolo 444 ibonisa ukuchuma nokuzinza.
555 - Ixesha loPhuculo
555 yinani lokudala utshintsho oluhle kunye nokuhamba phambili.
666 - Isikhumbuzi sokuphinda uhlawule
Nangona i-hype hype yeli nani inemyalezo obalulekileyo. Xa kubonwa ngokuqhelekileyo kuyisikhumbuzo sokuphinda uhlawule. Unokuthi ube neepatheni ezingcinga eziphazamisayo eziphazamisa ubuthongo bakho. Le nani inokucela ukuba ufune uncedo oluyidingayo ukuze uthulise ingqondo yakho kwaye ube luhle emzimbeni wakho. Kwakhona kuyisikhumbuzo sokugcina iliso kwiingqibelelo zakho kwaye wenze into eyiyo nangona kungekho mntu ukhangeleyo. Jonga indlela othetha ngayo kwabanye nakwabanye, kwaye ube nobubele entliziyweni yakho nasengqondweni yakho. Hlalani uvulekile kwabo bathandayo kunye nabo banomngeni. Qaphela ukukhwele okanye ukucaphuka xa umntu eqhuba kakuhle kwiindawo ezibalulekileyo kuwe. Qiniseka ukuba ukhetha uvelwano kwaye uhlale unyanisekile kumphefumlo wakho onobubele nothando ngokuwenza imisebenzi emihle ehlabathini kwaye ube nomusa kunye nobumnene nabanye kunye nawe.
777 - Utyikitye uMfundisi okanye umfundi
Inombolo yokomoya kakhulu, i-777 ibonisa ukufundisa okanye ukufunda indlela yokomoya yokucinga kunye nokuba nayo.
888 - Ukuphucula iDNA
Iingelosi zitsho ukuba inombolo 888 ayibonakali njalonjalo. Oku kungenxa yokuba iingelosi zibiza ngokuba yiyona "inombolo yokukhuphela" okanye "ikhowudi" yangempela. Xa kubonwa ngokuqhelekileyo yiZiko eziPhakamileyo ezifuna ukufakela utshintshi kwi-DNA yakho ekuvumela ukuba udibanise iibhloko ukuya kubonxibelelwano phakathi kwemida, ukuguga kunye nolwazi olunzulu lwe-esoteric. Le nani inamandla amakhulu kakhulu. mfutshane, inombolo 888 isebenza njengesiqalo sokuqala okanye ukujinisa ukuqonda kwakho iimfihlelo zeNdalo.
999 - I-Master Number
Xa ubona le nombolo kaninzi kukho isifundo esinzulu okanye imeko eyenzekayo ezisa izifundo ezibalulekileyo ekukhuleni komphefumlo wakho. Kungaba ngumqondiso osuka emazulwini ukuba ugqibe ixesha lokukhula, "Ukufundisa" ukuze uthethe. Kuqhelekileyo ngeli xesha ukuphelisa imisebenzi, ubudlelwane kunye nabangane abangasayi kukhonza inkulumo yakho ephakamileyo. Nangona kunjalo, ukuvulwa komnyango omnye kuvula i-entsha kunye namava amatsha aya kuhamba phakathi kweso sithuba okanye ngubani oya kuba.
10:10 - I-Alpha-Omega
I-Alpha-Omega, 10:10 ibonisa ukuqala nokuphela. Eli nani lizele izithembiso. Isebenza njengesivulo kwiNhliziyo Yenceba.
11:11 - Isango Lokuvuswa Kwakho
I-11:11 isebenza njengesango okanye ukuvulwa kobuqu bakho. Ukuqaphela indawo yakho ngaphakathi kunyuka kwamanje kwiplanethi.
12:12 - Indlela kaThixo
Inani 12:12 liyinombolo kaThixo. Ibonisa ukuba i-Real Realms ifuna ukukhuphela kwiindlela zakho ezintsha zokuba ngumntu kunye nokuphila emhlabeni. Kufana nomtshintshi, uvuliwe ukuba ungene kwiNdlela Yakho Yomsebenzi ukuze ube yintlalontle yabantu kunye nayo yonke into ephilayo emhlabeni. A
I-Article ehlelwe nguPhylameana lila Desy
Yintoni efundiswa kwiZikolo eziMfihlelo?
Kuthetha ukuthini ukuchaneka?
Ukuthatha izikolo ze-GMAT - GMAT
I-Aztlan, I-Mythical Land of the Aztec-Mexica
Ngaba iNkokeli Yowesifazane uGloria Steinem Yashadile?
"Picasso kwi-Lapin Agile" nguStephen Martin
AbaPolisi kunye neDies yaseNetherlands
Iifayile zePeriodic Printable (PDF)
Konke malunga nesiNgesi esikhulu saseFrentshi 'Faire' ('Ukwenza')
I-Admissions College ye-Menlo
Ziziphi Izipho Zomoya?
Benzisa 'i Grande'